ခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားခြင်းမရှိဘဲသဘာဝအတိုင်းလှပနေကြတဲ့ ကိုရီးယားမင်းသမီး ၃ ယောက်
သဘာဝအတိုင်းလှပနေကြတဲ့ ကိုရီးယားမင်းသမီး ၃ ယောက်
8 Jun 2018 . 12:15 PM
ခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားခြင်းမရှိဘဲ သဘာဝအတိုင်းလှပနေကြတဲ့ ကိုရီးယားမင်းသမီး ၃ ယောက်
ခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားခြင်းမရှိဘဲ သဘာဝအတိုင်းလှပနေကြတဲ့ ကိုရီးယားအမျိုးသမီးအနုပညာရှင်တွေ ကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ နာမည်ကြီး ကိုရီးယားမင်းသမီးတချို့ထဲကမှ သဘာဝအတိုင်းလှနေတဲ့ မင်းသမီးတွေပါ။ ဒီထဲကမှ ပရိသတ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ မင်းသမီး သုံးဦးကတော့ ….
ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ ဟာဂျီဝန်းဟာမျက်နှာကိုဘာမှပြုပြင်ထားခြင်းမျိုးမရှိဘဲ သဘာဝအတိုင်းလှပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့  ကောင်းမွန်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ပညာအရည်အချင်းတွေကြောင့် နာမည်ကျော်ကြားသူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်တဲ့ အခါမှာ ဇာတ်ရုပ်မျိုးစံကိုပိုင်နိုင်စွာ သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အပြင် အလွမ်းအဆွေး ၊ ဟာသ ၊ အက်ရှင် အစရှိတာတွေကိုစွယ်စုံလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် သူမရဲ့ အသက်က ၃၉ နှစ်ရှိပါပြီ။ သူမကိုတော့ ၁၉၇၈ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့ မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သူမကိုတော့ ၁၉၈၁ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှာမွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ My Sassy Girl(2001) ဇာတ်ကားနဲ့ နာမည်ကြီးလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူမ ကလည်း ခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားခြင်းမရှိတဲ့ အလှတရားကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမပါဝင်ဖူးတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကတော့ The Thieves (2012) ၊ The Berlin File (2013) ၊ Windstruck (2004) အစရှိတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ My Love From the Star (2013) ဆိုတဲ့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့လည်း အောင်မြင်မှုတွေကိုအတော်ရရှိခဲ့တဲ့ မင်းသမီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ Song Hye Kyo ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကို ၁၉၈၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးမင်းသမီး တစ်လက်ဖြစ်ပြီးတော့ အခုဆိုရင်အသက် ၃၆ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ လှပတဲ့မျက်နှာနဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့  စိတ်ဝင်စားမှုကို ရရှိထားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
သူမဟာလည်း မျက်နှာကို ခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားခြင်းမရှိတဲ့ သဘာဝအလှတရားကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူ မင်းသမီးတစ်လက်ပါ။ သူမပါဝင်ဖူးတဲ့ဇာတ်ကားတွေကတော့ Autumn in My Heart (2000) ၊ All in (2003) ၊ Full House (2004) ၊ The Winter ,The Wind Blows (2013) နဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်သူ မင်းသားဆောင်ဂျွန်ဂီ(Song Joong Ki) နဲ့ အတူသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Descendants of the Sun (2016) အစရှိတဲ့ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိခဲ့တဲ့ မင်းသမီးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခှဲစိတျပွုပွငျထားခွငျးမရှိဘဲ သဘာဝအတိုငျးလှပနကွေတဲ့ ကိုရီးယားမငျးသမီး ၃ ယောကျ
ခှဲစိတျပွုပွငျထားခွငျးမရှိဘဲ သဘာဝအတိုငျးလှပနကွေတဲ့ ကိုရီးယားအမြိုးသမီးအနုပညာရှငျတှေ ကိုဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။ နာမညျကွီး ကိုရီးယားမငျးသမီးတခြို့ထဲကမှ သဘာဝအတိုငျးလှနတေဲ့ မငျးသမီးတှပေါ။ ဒီထဲကမှ ပရိသတျနဲ့ရငျးနှီးတဲ့ မငျးသမီး သုံးဦးကတော့ ….
ကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့နာမညျကွီးမငျးသမီးတဈလကျဖွဈတဲ့ ဟာဂြီဝနျးဟာမကျြနှာကိုဘာမှပွုပွငျထားခွငျးမြိုးမရှိဘဲ သဘာဝအတိုငျးလှပနတောဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ ကောငျးမှနျတဲ့ သရုပျဆောငျပညာအရညျအခငျြးတှကွေောငျ့ နာမညျကြျောကွားသူ တဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။
သရုပျဆောငျတဲ့ အခါမှာ ဇာတျရုပျမြိုးစံကိုပိုငျနိုငျစှာ သရုပျဆောငျနိုငျတဲ့အပွငျ အလှမျးအဆှေး ၊ ဟာသ ၊ အကျရှငျ အစရှိတာတှကေိုစှယျစုံလုပျဆောငျနိုငျတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျဖွဈပါတယျ။ အခုဆိုရငျ သူမရဲ့အသကျက ၃၉ နှဈရှိပါပွီ။ သူမကိုတော့ ၁၉၇၈ ခုနှဈ ဇှနျလ ၂၈ ရကျနေ့ မှာမှေးဖှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
သူမကိုတော့ ၁၉၈၁ခုနှဈ အောကျတိုဘာလ ၃၀ ရကျနမှေ့ာမှေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ My Sassy Girl(2001) ဇာတျကားနဲ့ နာမညျကွီးလူကွိုကျမြားခဲ့တဲ့ မငျးသမီးတဈလကျလညျးဖွဈပါတယျ။
သူမ ကလညျး ခှဲစိတျပွုပွငျထားခွငျးမရှိတဲ့ အလှတရားကို ပိုငျဆိုငျထားသူတဈဦးဖွဈပါတယျ။ သူမပါဝငျဖူးတဲ့ ဇာတျကားတှကေတော့ The Thieves (2012) ၊ The Berlin File (2013) ၊ Windstruck (2004) အစရှိတာတှပေဲဖွဈပါတယျ။ My Love From the Star (2013) ဆိုတဲ့ ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲနဲ့လညျး အောငျမွငျမှုတှကေိုအတျောရရှိခဲ့တဲ့ မငျးသမီးလညျးဖွဈပါတယျ။
နောကျထပျတဈယောကျကတော့ Song Hye Kyo ပဲဖွဈပါတယျ။ သူမကို ၁၉၈၁ ခုနှဈ နိုဝငျဘာလ ၂၂ ရကျနမှေ့ာမှေးဖှားခဲ့တာပါ။ ကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့နာမညျကွီးမငျးသမီး တဈလကျဖွဈပွီးတော့ အခုဆိုရငျအသကျ ၃၆ နှဈရှိပွီ ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့လှပတဲ့မကျြနှာနဲ့ သရုပျဆောငျမှုတှကွေောငျ့ပရိသတျရဲ့ စိတျဝငျစားမှုကို ရရှိထားသူတဈဦးဖွဈပါတယျ။
သူမဟာလညျး မကျြနှာကို ခှဲစိတျပွုပွငျထားခွငျးမရှိတဲ့ သဘာဝအလှတရားကိုပိုငျဆိုငျထားသူ မငျးသမီးတဈလကျပါ။ သူမပါဝငျဖူးတဲ့ဇာတျကားတှကေတော့ Autumn in My Heart (2000) ၊ All in (2003) ၊ Full House (2004) ၊ The Winter ,The Wind Blows (2013) နဲ့ အိမျထောငျဖကျဖွဈသူ မငျးသားဆောငျဂြှနျဂီ(Song Joong Ki) နဲ့ အတူသရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ Descendants of the Sun (2016) အစရှိတဲ့ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲတှနေဲ့အောငျမွငျမှုတှကေို ရရှိခဲ့တဲ့ မငျးသမီးပဲဖွဈပါတယျ။